Saddex toddobaad ayaa laga joogaa bannaanbixii Kärrtorp - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bannaan-bax looga soo hor-jeedo faqooqa oo ka dhacay Kärrtorp. Sawirle: Anders Wiklund / TT
Saddex toddobaad ayaa laga joogaa bannaanbixii Kärrtorp
La daabacay onsdag 15 januari 2014 kl 16.35
Saddex toddobaad ayaa iminka ka soo wareegtey kolkii ey bannaan-bax ballaaran oo looga soo hor-jeedo faqooqa iyo ururrada xag-jirka ah oo ey isugu soo baxeen dad lagu qiyaasey 16 000 oo ruux ey isugu soo yimaadeen xaafadda Kärrtorp oo dhacda koonfurta magaalada Istockholm.
Falkaa ayaa ka dambeeyay iyada oo bannaan-bax looga soo hor-jeedo sawirro ah astaantii fashiistadii Jarmalka oo derbiyada xaafadda lagu summadey toddobaadkii ka sii horeeyey ey carqaladeeyeen koox fashiisto ah. Middaasina oo argagax iyo neceeyb ku abuurtay dareenka shacabka. Iyadoona uu falkaasi hor-seeday bannaan-baxyo goobo badan oo dalka ku yaala.
Labada bannaan-bax ayay ka dambeeysay shabakadda urur lagu magacaabo "Linje 17 mot rasism - leenka
17-an ee la dagaalanka faqooqa". Sandra waxay ka mid ahayd dadyoowgii lahaa fikirka, iyada oo dhanka kale aan fileeyn iney tiro intaa le'eg ee bulshada ka mid ahi ey isugu soo bixi doonaan. Wuxuu ahaa fal lagu dareemeyo dareen aad iyo aad u wanaag-san, sida ay sheegtay:
- Dareen aad u qurux badan ayuu ahaa iyo in labada bannaan-bax midkii hore ey isugu soo baxaan boqolaal, halka midkii xigeyna ey isugu soo baxeen kumanaan. Waxaan jeclaan lahaa inaan halkan ka sheego inaanan markii hore fahmin tirada dadyoowga ka qeeyb qaatey, maadaama aan masraxa taagnaa. Maadaama ey ii muuqdeen oo keliya tiro dad oo aad moodo sidii baddii oo kale, hase yeeshee aanan qiyaasi karin tiradooda illaa inta ey ciidanka ammaanku nagu war-geliyaan tirada ka soo qeeyb-gashey. Wuxuu ahaa dareen loo bogo iyo in la arko in bulsho sidaa u badan ey u istaagto ka hor-tagga faqooqa. Dad badan ayaa gar-waaqsadey in loo baahan yahay sidii la isaga kaashan lahaa amuurtaa. Iyo weliba in lagu farax-san yahay in qeyb laga ahaa bannaab-baxyadii ay shabakadani hor-muudka ka ahayd.
Waxaad sheegtay in la arko iyada oo dadku ku sheekeey-saneyaan tabakaayada cunnada ee taayleendeeska?
- Waa sidaa. Waxaan maqlay dhowr-jeer oo kala duwan sida ey dad aan aqoon isu laheyn ey dood u dhex martey oo ey is weeydiinayeen: "Bannaan-bixii miyaad joogtay? Haa! Haa, aniga qudheeydu waan joogay! Maxaad aragtay, maxaa la sheegayey. Iyada oo doodduna ku sii socoto ka xaajoodka xaaladda xaafaddaa loo deggen yahay, sida ay sheegtay Sandra oo ka mid ahayd dadyoowgii lahaa fikirradii ey ka biloowdeen bannaan-bixii muddo iminka saddex toddobaad laga joogo ka dhacay xaafadda Kärrtorp ee koonfurta magaalada Istockholm.